Xildhibaan Jeesoow “Dabageed ma burburin karo Hirshabelle waxaana dhistay Gacan ka weyn” – Kalfadhi
Xildhibaan Jeesoow “Dabageed ma burburin karo Hirshabelle waxaana dhistay Gacan ka weyn”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacab ee Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana laga soo doortay Hirshabeelle ayaa sheegay in aysan u dulqaadan doonin xiisada siyaasadeed ee ka taagan gobalka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, ayaa fariin u diray Gudoomiyha xilka laga qaaday ee gobalka Hiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, oo sheegay in ay ka go’een Maamul Hirshabelle “Dabageed ma burburin karo Hirshabelle, waxaana dhistay gacan ka weyn” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Jeesoow.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, waxa uu sheegay in Hiiraan aysan ka go’i karin Hirshabelle, lakiin ay diyaar u yihiin xalinta dhibaatooyinka uu tirsanayo Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee gobalka Hiiraan “dhaqaalaha Gobalka Hiiraan waxaa loo soo qaadaa Shabeellada dhexe, waana qalad jira” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Jeesoow.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, ayaa dhinaca kale ku dhaliilay Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, xilka qaadista isdabajooga ah ee uu sheegay in ay u gaar tahay gobalka Hiiraan “markasta waxaan aragnaa masuul xilka laga qaaday oo lagu leeyahay deenta intii uu shaqaynayay mushaarna aan qaadan jiray ” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Jeesoow.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow waxa uu sheegay in hada kadib ay la xisaabtami doonaan Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, si loo ilaaliyo sii jiritaanka Maamulka Hirshabelle.
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo dhex-dhaxaadin ka bilaabay Xiisadda ka taagan Beladweyne